‘खेलेरै बाँच्न नेपालमा कठिन छ’ | suryakhabar.com
पौडेलको ठोकुवाः ओली सरकार जसरीपनि पैसा जम्मा गरी आगामी चुनाव जित्ने रणनीतिमा
लकडाउनका कारण विभिन्न देशमा नेपाली अलपत्र परेकोमा एम्नेस्टीको ध्यानाकर्षण
मेडिकल सामाग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिनु ओली सरकार असक्षम भएको प्रमाणः अध्यक्ष थापा
डा भट्टराईको प्रश्नः कोरोना भाईरस गोलीले मार्ने हो र, औंषधि ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिएको ?
नेता गुरुगंको टिप्पणीः सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएर भ्रष्टाचारको चोरबाटो अपनायोे
कोरोना संक्रमण रोक्न अब मेयर/उपमेयर, वडाध्यक्ष/वडा सदस्यको भूमिका थप महत्वपूर्णः गगन थापा
Home खेलकुद ‘खेलेरै बाँच्न नेपालमा कठिन छ’
‘खेलेरै बाँच्न नेपालमा कठिन छ’
on: ४ मंसिर २०७५, मंगलवार १२:१७ In: खेलकुदTags: No Comments
काठमाडौँ । “खेलेरै बाँच्न नेपालमा कठिन छ, पछिल्लो समय लिग फुटबल पनि हुन छोड्यो, परिवारको भविष्यका लागि पनि देश छोड्नुप¥यो” आइतबार हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेलमैदानमा भेटिएका नेपाली राष्ट्रिय टोलीका अग्रपङ्तिका खेलाडी सन्तोष साहुखलको भनाइ हो यो ।
“अहिले देश फेरियो परिवेश फेरियो काम एउटै हो, नेपालमा रहँदा फुटबल खेल्थेँ, जापानमा फुटबल सिकाउँछु”, साहुखलले भने । परिवार र सन्ततिका लागि पनि केही गर्नुपर्ने भएकाले विदेश जानुपरेको उनको भनाइ छ । “खेलेर मात्र जीवन धान्न सकिने अवस्था रहेन, म मात्र होइन धेरै खेलाडी विदेशिएका छन् ।”
नेपाली फुटबलमा साहुखलको नाम पछिल्लो तीन वर्षदेखि कतै सुनिएको छैन । साहुखल फुटबलबाटै टाढिएका भने होइनन् । फरक मुलुक र फरक परिवेशमा उनले फुटबललाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तीन वर्षयता सन्तोष जापानमा छन् र मुख्य कुरा उनी फुटबलमै छन् । त्यहाँको एक क्बलमा आबद्ध उनी बालबालिकालाई फुटबल सिकाउँछन् ।
विसं २०७२ मा राष्ट्रिय लिग खेलेयता उनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट कुनै पनि खेल खेलेका छैनन् । जापानबाट एक महीनाको छुट्टीमा अघिल्लो साता नेपाल आएका उनलाई नेपाली फुटबलको मायाले छोडेको छैन । “च्यासल युथ क्लबका प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यले लिग खेल्न आग्रह गरे पछि म नेपाल आएँ ।”
जारी लिगमा उनी अब च्यासलको जर्सी लगाएर मैदानमा उत्रने छन् । “च्यासलमा अहिले सबै नयाँ खेलाडी रहेछन्, विमल घर्तीबाहेक सबै साथी नयाँ छन्, उनीहरुसँग मिलेर लिगमा राम्रो प्रदर्शन गर्नेछु ।”
जापान र नेपाली फुटबलमा के फरक पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा साहुखलले भने, “नेपालको प्रशिक्षण मैदान राम्रो छैन, त्यहाँ पूर्वाधारको हिसाबले धेरै राम्रो छ ।” जापानको लिग ‘एट’ फुटबल लिग खेलिरहेका उनलाई जापानमा मात्रै फुटबल र फिटनेसबारे ज्ञान भयो । नेपालमा रहँदा प्राय फिटनेसका कारण विवादमा आइरहने उनी अहिले फिट देखिन्छन् । सन्तुलित आहार र सन्तुलित खेल नै खेलाडीको फिटनेसमा अहम् हुने उनले बुझे । नेपाली खेलाडीमा त्यही समस्या अहिले पनि रहेको उनको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दाखेल्दै जापान भासिएका उनले अहिलेसम्म सन्न्यासको घोषणा गरेका छैनन् । “अझै मौका पाए राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने इच्छा छ”, साहुखलको भनाइ थियो ।
पछिल्लोपटक राष्ट्रिय लिगमा थ्रीस्टार क्लबबाट खेलेका सन्तोषले त्यसबीच नेपाल आएर मोफसलका केही प्रतियोगितामा मनाङमस्र्याङ्दी क्लबबाट पनि खेलेका थिए । घरेलु फुटबलमा सर्वाधिक गोलकर्ता रहेका सन्तोषले लिग फुटबलमा १०० गोल पूरा गरिसकेका छन् । उनले थ्री स्टार, एपिएफ र मनाङमस्र्याङ्दीबाट व्यावसायिक लिग खेलिसकेका छन् । थ्रीस्टारका लागि उनले दुई पटक ए डिभिजन लिग र एक पटक राष्ट्रिय लिगसमेत जितेका छन् ।
सन्तोषले राष्ट्रिय टोलीमा पछिल्लोपटक सन् २०१५ मा भएको फिफा विश्वकप छनोट खेलेका थिए । उनले भारतविरुद्धको दोस्रो लेगको खेल शुरुआती रोजाइबाट खेलेका थिए । त्यसपछि उनी टोलीमा अटाएका छैनन् । उक्त खेलमा विमल घर्तीमगर र सन्तोषले नेपालको अग्रपङ्क्ति सम्हालेका थिए । अहिले च्यासल युथ क्लबमा पनि विमल र सन्तोषले नै फरवार्ड सम्हाल्नेछन् ।
सन् २००७ को अक्टोबरमा भएको विश्वकप छनोटअन्तर्गत ओमानविरुद्धको खेलबाट डेब्यू (अन्तर्राष्ट्रिय खेल शुरु) गरेका सन्तोषले २०१५ मा विश्वकप छनोटअन्तर्गत नै भारतविरुद्ध अन्तिम पटक खेलेका थिए । साहुखल जस्ता दर्जनौँ खेलाडी अहिले विदेश पलायन भइसकेका छन् । यस्ता प्रतिभालाई रोक्नु र खेलेरै जीवन धान्न सक्ने बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
‘ए’ डिभिजन लिगको अहिलेसम्मको तालिकाः थ्रीस्टार शीर्ष स्थानमा, कुन टिम कतिऔँ स्थानमा ?
३१७ एचआइभी सङ्क्रमित फेला
२० चैत्र २०७६, बिहीबार १४:५७
टोकियो ओलम्पिक अर्को वर्षको जुलाईमा हुने पक्का
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०६:३०
सरकारको कोरोना राहत कोषमा एक लाख सहयोग गर्ने क्रिकेटर सन्दीपको घोषणा
१४ चैत्र २०७६, शुक्रबार ०८:४१
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १२:१७